Run ma aha: Ukraine ayaa beenisay afduubkii diyaaradeedii Kabul
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Run ma aha: Ukraine ayaa beenisay afduubkii diyaaradeedii Kabul
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • Wararka Iiraan • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Ukraine War Deg Deg Ah • Wararka kala duwan
Ukraine ayaa beenisay afduubkii diyaaradeedii Kabul
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ukraine, dhammaan diyaaraddii Kiev u adeegsan jirtay inay ka daadgureyso muwaadiniinta Ukraine ee Afgaanistaan ​​ayaa si nabad ah ugu soo laabtay Ukraine.
Ukraine ayaa sheegtay in aysan jirin wax diyaarado Ukraine ah oo lagu afduubtay Kabul ama meel kale.
Dhammaan diyaaradaha daadgureynta Ukraine ayaa si nabad ah ugu soo laabtay Kiev.
256 qof ayaa lagu daadgureeyay saddex duulimaad.
Sida uu sheegay af -hayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ukraine, warar hore oo ku saabsanaa diyaarad laga lahaa Ukraine oo lagu afduubtay magaalada Kabul ee caasimadda Afgaanistaan ​​kadibna loo duuliyay Iiraan ma ahayn kuwo run ah.
“Ma jiro diyaarad Ukraine laga afduubay Kabul ama meel kale. Wararka diyaarad la afduubay in qaar ka mid ah warbaahintu ay faafinayso waa kuwo aan run ahayn, ”ayuu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ukraine Oleg Nikolenko ku sheegay wareysi uu maanta siiyay RBC wakaaladda wararka Ukraine.
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Dibadda Rasmi, dhammaan diyaaradihii Kiev u adeegsan jiray inay ka soo daadgureeyaan muwaadiniinta Ukraine Afgaanistaan ​​waxay si nabad ah ugu laabteen Ukraine. Ilaa hadda, 256 qof ayaa lagu daadgureeyay saddex duulimaad.
Afhayeenka Ururka Duulista Rayidka ee Iran Mohammad Hassan Zibakhsh, ayaa isna dhankiisa beeniyay wararka sheegaya diyaarad la afduubtay. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Mehr, wuxuu tilmaamay in diyaaraddii Ukraine ay u joojisay shidaalka shidaalka magaalada Mashhad ee Iran Isniintii ka dibna ay ku sii jeedday Kiev, halkaas oo ay ku degtay 10:50 pm waqtiga maxalliga ah.
Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Ukraine, Yevgeny Yenin ayaa goor sii horreysay sheegtay in dad aan la garanayn ay qabteen diyaarad laga lahaa Ukraine Talaadadii oo ay u duushay Iran. Sida uu sheegay sarkaalku, dhab ahaantii diyaaradda waa la afduubay.